အသက် ၂၀ - နေ့ ၂၁၇ ငရဲပြည်မှတက်ခြင်း - Brain On Porn
Accounts ကို Rebooting: Page2of 3
အသက် ၂၀ - နေ့ ၂၁၇ ငရဲမှတက်ခြင်း
နောက်ခံသမိုင်း ကျွန်ုပ်အသက် ၂၀ ရှိပါပြီ ငါယောက်ျားပါ အသက် ၁၀ နှစ်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ဒီအသက်အရွယ်မှာလည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏကြည့်ရှုခြင်း၊ ၁၂ နှစ်အရွယ်မှာ (ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာကိုရရှိသောအခါ)၊ ပိုလေးတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစတင်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ခဲ့တယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမကြည့်မီ (ကလေးဘဝအတွေ့အကြုံအချို့ကိုကျွန်ုပ်အပြစ်တင်သည်) ပင်ကျွန်ုပ်၌ fetish အမြဲရှိပြီးအမြဲတမ်းကျွန်ုပ်သိသောလူများနှင့်ဖြစ်ပျက်ချင်သောအရာများအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ အမျိုးသမီးတွေနဲ့အိပ်ရာထဲမှာငါတွေ့ခဲ့သမျှအားလုံးဟာအားနည်းချက်ရှိလို့ပါပဲ။ တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာနည်းပညာပိုင်းအရအပျိုစင်ဖြစ်နေဆဲပါ။ ဒါကကျွန်မဟာပျမ်းမျှထက်သာလွန်နေပြီးလှပသောအမျိုးသမီးများနှင့်ပြည့်နေတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းမှာ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ။ ငါနံနက်သစ်သားရတဲ့ပြproblemsနာများဘူး။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဟာမနက်မှာထင်းထင်းအမြဲတမ်းရှိခဲ့တယ်။ (ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာတောင်မှအစာစားခဲ့တယ်) ငါအိပ်မပျော်မီငါစိတ်ကူးယဉ်ခက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကဲ့သို့ခိုင်မာသည်၊ ငါရပ်တန့်ပြီးစဉ်းစားရန်ခဏခဏအခါတိုင်းငါတနေ့လုံးစိုက်ထူရလိမ့်မယ်။ ငါဒီစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးတဲ့နေရာတွေ / အကြိမ်တချို့ကိုပြန်ကြည့်ရတာကြောက်စရာပါ။ ငါမှာလည်းရည်းစားတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကလုံးဝ (လုံးဝလိင်ဆိုင်ရာမဟုတ်)၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရမ်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါလုံးဝမပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဘူး။ ငါပြုလျှင်, စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူပါပဲ။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအစပိုင်းကစပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုငါစွဲလမ်းခဲ့ဖူးတယ်။ အကြိမ်တစ်ဒါဇင်လောက်ပြန်ပေါ်လာတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးကြိုးစားမှုမှာ ၇၅ ရက်ကြာခဲ့သည် ပြီးတော့နေ့ ၅-၁၀ ရက်၊ ၃၀-၄၄ နေ့တွေမှာကျွန်တော်ဟာအကျိုးရှိတဲ့အကျိုးဆက်တွေခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်ကြိုးစားခဲ့တာရက်ပေါင်း ၁၆၀ ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်နှစ်ကြိမ် (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ) နှင့်လိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းအချို့ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နေ့ ၄၀-၅၀ တွင်ခိုင်မာသောအကျိုးကျေးဇူးများရှိခဲ့ပြီးအခြားအကျိုးကျေးဇူးများကတဆင့်ကူးစက်ပျံ့နှံ့သွားသည်နှင့်အမျှပုံမှန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
nofap အတွက်ယုံကြည်ချက်ရုံဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ခဲရန်လိုအပ်ပါသည်ရှိ၏။ ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုထဲကညစ်ညမ်းရရန်လိုအပ်သည်။ ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုပြန်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏အကျိုးကျေးဇူးများ, ရုန်းကန်မှုများနှင့်အကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုပြောနေတာ, (ငါတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းအကောင်းဆုံးအဖြစ်) ဒီချည်ပေါ်ကဒီမှာနေ့စဉ် post သွားနေပါတယ်။ ဤသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေနေကြတယ်ဆိုတာကိုခံယူဖို့ငါ့ကိုကူညီပေးပါမည်။
အကျိုးကျေးဇူးများ: (X ကိုအတူမှတ်သားသူများသည်ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကြုံတွေ့ခဲ့ကြဘာလဲ)
အဘယ်သူမျှမဦးနှောက် Fog (X)
ပိုများသောယုံကြည်မှု / နည်းသောလူမှုတော့ပူပန် (X)
ပိုများသောစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန / အာရုံစိုက်တဲ့ (X)
အိပ်မက်များသည် သာ. ကောင်း၏ (X) ကိုသတိရပါနိုင်သလား
Cleaner အရေပြား (အနည်းငယ်)
ဆံပင်ကြီးထွားမှု (X - အံ့သြစရာကောင်းတာကဟုတ်တယ်၊ ငါအရင်ကငါ့ဆံပင်ကိုနည်းနည်းဆံပင်ကျွတ်တာ)
တိုးတက်မှုနှုန်း Spurt / အမြင့်
Better Face Complexion (X) - ကျွန်ုပ်၏မျက်လုံးများသည် ပို၍ ထင်ရှားလာသည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့မျက်နှာအမူအရာဟာမကြာခဏပြောင်းလဲသွားပြီး၊ “ glossed-over” or gloomy မရှိတော့ဘူး
စိတျလှုပျရှားမှု၏ပိုကြီးတဲ့ Range (X)
စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ / အချက်ပြမှုများကိုပိုမိုသိရှိနားလည်ခြင်း (X) - ၎င်းသည်ရှင်းလင်းချက်အချို့ကိုခံထိုက်သည်။ ငါကလူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှု (နှင့်ငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်) ကိုပိုကောင်းအောင်၊ ပိုနားလည်အောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ပြီးတော့အချက်ပြမှုနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူကောက်ယူနိုင်တယ် (ဒီမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေပါဝင်တယ်) ။
သင်၏ laptop နှင့်ဖုန်းတွင် porn / trigger blocker ကိုတပ်ဆင်ပါ။ ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေ / မိသားစုဝင်တစ် ဦး ကိုသင့်အားစကားဝှက်တစ်ခုပြောစေပါ။ သို့မှသာသူတို့သည်စကားဝှက်ကိုသိနိုင်ပြီး blocker ကိုဖယ်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၌ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သောသူတစ်ယောက်မျှမရှိပါကစကားဝှက်ကိုရေးထည့်ရန်အခက်တွေ့စေပါ။ ဤအရာဖြင့်ကျွန်ုပ်ဘာကိုဆိုလိုပါသနည်း။ ငါဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုငါပြောပြမယ်၊ စာလုံးအသေး / အက္ခရာတစ်ခုစီကိုစာအုပ်ငယ်တစ်ခုလုံးမှာစဉ်ဆက်မပြတ်ငါရေးပြီးစာအုပ်ကိုသော့ခတ်ဘောက်ထဲမှာသော့ခတ်လိုက်တယ်။ ထိုနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းခံရလျှင်သေတ္တာကိုဖွင့ ်၍ စာအုပ်ငယ်သို့ သွား၍ ကိုယ်တိုင်ဇာတ်ကောင်တစ်လုံးချင်းစီရိုက်ရမည်။ ယင်းကသင်၏သွေးဆောင်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီးအကျိုးဆက်များကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်သင့်အားအချိန်ပေးလိမ့်မည်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်၏အချိန်ကိုအကြီးအကျယ်လျှော့ချပါ။ ရုပ်မြင်သံကြားပြခန်း၊ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ reddit သို့မဟုတ်ရယ်စရာကောင်းသောမှတ်စုများနှင့်ရုပ်ပုံများမှတဆင့်မိမိကိုယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့နှိုးဆွရန်အင်တာနက်ကိုအနည်းဆုံးအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ငါနည်းနည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်မယ်ဆိုရင်ငါကပိုလိုချင်လာတယ်၊ ဒါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါစိတ်ကူးစိတ်သန်းများမှဝေးဝေးရှောင်ချင်သောကြောင့်, ငါသည်လည်းအင်တာနက်ပေါ်မှာငါ့အချိန်ကိုလျှော့ချလေ့ရှိပါတယ်။
အထက်ပါအကြံပြုချက်အရဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာ / မီဒီယာနှင့်ဆက်သွယ်မှုများကိုဖြတ်တောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုလျင်မြန်စွာပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်မည်ဟုယုံကြည်သည် (သတင်းမဟုတ်သော်လည်း) ။ ငါဟာဒီအလေ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူသားတွေဟာလူ ၁၅၀ ၀ န်းကျင်နဲ့သိကျွမ်းဖို့၊ ရှင်သန်ဖို့၊ ဒါပေမဲ့ဒီဒီဂျစ်တယ်ခေတ်မှာအဲဒီလူ ၁၅၀ ထဲကတစ်ယောက်ကငါတို့သိတဲ့ကျော်ကြားသူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သူတို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမသိဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကငါတို့သိပြီး“ လိုက်နာ” တဲ့သူပဲ။ Britney Spears ကသူမဆံပင်နဲ့လုပ်ခဲ့တာတွေ၊ Kanye West က Taylor Swift ကိုပြောခဲ့တာတွေမလိုအပ်တဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဖြတ်တောက်မယ်ဆိုရင်ငါယုံကြည်တယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့လူတွေ - ငါတို့ ၁၅၀ ထဲကိုဝင်လာမယ့်လူတွေကိုနေရာပေးတယ်။ "အဖြစ်မှန်လူ" နှင့်အတူ, ငါ့ယုံကြည်ချက်အတွက်, အဖြစ်မှန်သို့ထပ်မံကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်ခိုင်လုံလုံ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏အမှတ်တရများသည်ရုပ်ရှင် / porn မြင်ကွင်းများထက် real-life အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပါကအဖြစ်မှန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးပိုမိုခိုင်မာလာသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။
ဒါကငါသင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါလည်းအဲဒါကိုအရမ်းအရေးကြီးတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါအကြံပြုချက်တွေပေးချင်တယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများနေချိန်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမရှာဖွေရန်မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်အစာမစားသောအစားအစာ၊ ရယ်စရာကောင်းသောဗီဒီယိုများ၊ လက်သည်းကိုက်ခြင်း၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကြိုတင် reboot လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာအံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ခံစားခဲ့ရပြီးအစပိုင်းမှာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ခဏခဏအိပ်နေခဲ့တယ်။ နောက်မှမှသာငါကိုယ်ထိလက်ရောက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည်မဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်လာသည်။ ငါ့ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအစားထိုးခြင်းအတွက်မည်သည့်အလိုဆန္ဒမျိုးကိုမဆိုရှာသည်။ အကယ်၍ သင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ဖြတ်၍ တိုက်လာပါကကျွန်ုပ်တွေ့သောမိနစ် ၁၅ မှ ၃၀ အတွင်းသင့်ကိုလန်းဆန်းစေလိမ့်မည်။
ငါမကြာသေးမီကကျင့်သုံးခဲ့သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ porn နှင့် fapping ဟူသောအတွေးကိုလုံး ၀ စွန့်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် NoFap၊ ဤ site၊ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်၏နေ့ကောင်တာတို့၏အတွေးများပါ ၀ င်သည်။ အဲဒီအစား၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤအကြောင်းအရာကိုနောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများကို ၁၀ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်သာကြည့်သည့်အခါမှသာအာရုံစိုက်ပါမည်။ ဤနည်းဖြင့်တစ်နေ့လုံးခေါင်းစဉ်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားဘဲအချိန်တိုအတွင်းတွင်၎င်းကိုအသေအချာကြည့်ပါမည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီနည်းလမ်းကလူတိုင်းအတွက်အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး၊ တချို့လူတွေက NoFap နဲ့သူတို့ရဲ့နေ့တန်တိုင်ကိုအခွင့်အလမ်းရတိုင်းအချိန်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ သင်မပြီးသေးပါကရိုက်ချက်တစ်ခုပေးပါ။ ငါငါ့အတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်လို့ထင်တယ်
သငျသညျအရာတစ်ခုခုမှာအကောင်းပြုမိပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့, သင့်ကိုယ်သင်ဆုချသင့်တယ်မဆိုလိုပါ။ တစ်ခါတစ်ရံဒီအပင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မသတ်မှတ်ပေမည်။ အဆိုပါအနည်းဆုံး, ဒီဆုလာဘ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့နှင့်သင့်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အားထိခိုက်မဟုတ်ပါဘူးသေချာပါစေ။ (ထွ။ အားကစားခန်းမမှာအဆီဆုံးရှုံးများအတွက်ဆုလာဘ်အဖြစ်ပီဇာစား) ။
အစဉ်အမြဲအစဉ်အမြဲစွန့်လွှတ်ဘူး။ ဝေးလွန်းသွားပြီအဖြစ်မျှထိုကဲ့သို့သောအရာရှိပါသည်။ ငါတို့သည်ဤဆောင်ပုဒ်မရေမတွက်နိုင်တဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေတစ်လျှောက်လုံး resonate မြင်ကြပြီ။ ကိုယ်ကသာမြင်ရဖို့ခက်သည်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်မှန်တစ်လျှောက်လုံးစိမ်။
ဒါကအရေအတွက်တစ်ခုထက်ပိုပြီးပိုကောင်းတဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုလို့ငါတကယ်ယုံကြည်တယ်။ ငါတို့ကိုပြောင်းလဲဖို့အချိန်ကိုမစောင့်နိုင်ဘဲကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောင်းလဲဖို့အချိန်ကိုသုံးရတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင်၊ ကျောင်းစာကိုမပျင်းပါနဲ့၊ အစာစားတာကိုအစာမစားဘဲအစိုစားပါ၊ ဒါမှမဟုတ်ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းမကောင်းတဲ့အလေ့အထတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့သင်ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ပိုအိပ်ပါ။ ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း၊ ကျန်းမာစွာစားခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖိအားပေးစစ်ဆေးမှုများကိုမကြာခဏပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစိတ်ဖိစီးမှုစစ်ဆေးမှုများကိုကျော်လွှားနိုင်ပါက၊ PMO၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူကျန်းမာသောအလေ့အထကိုအစားထိုးလိုက်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာပြန်လည်နိုးကြားစေသောကြောင့်တိုးတက်မှုဖြစ်လာလိမ့်မည်။
တစ်ခါတလေငါရွေးချင်တဲ့အခါငါပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက် (porn-free person) ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်တစ်ခါတလေငါမှာ porn (ကြည့်ဖို့ဆင်ခြေတစ်ခု) ရှိတယ်။ ထို့ကြောင့်နက်ဖြန်နေ့၌ကျွန်ုပ်ခရီးစတင်မည်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်ထိုနေ့အတွင်းညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ခြင်းအားကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်သည်။ ဤအတွေးအခေါ်သည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် longrun ၌သင်၏ willpower ကိုလျော့ကျစေပြီးမကောင်းသောအလေ့အထဖြစ်လာသည်။ သင်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းကိုစိတ်ကူးပေါ်လာသည့်အခါတိုင်းဤအရာကိုသင့်ကိုယ်သင်ဆက်ပြောလိမ့်မည်၊ သင်၏စိတ်ကူးသည်သင့်ဘဝ၏အခြားရှုထောင့်များတွင်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ ဒါဟာနွေးထွေးတဲ့ရေကိုသောက်ပြီးသင်လိုအပ်တာထက်ပိုပြီးနေဖို့လိုတယ်။ သင်ဟာမကြာမီသင်အလုံအလောက်ရှိတော့မည်ကိုသိသောကြောင့်၊ သင်ဟာအစစ်အမှန်ကမ္ဘာကိုမသွားချင်သေးဘူး၊ နောက်ထပ်မိနစ်အနည်းငယ်လောက်အနားယူချင်တယ်။
အားလုံး (အနည်းဆုံးငါ့ကို) အားလုံး ODDS ဆန့်ကျင်တစ်ခုခုအောင်မြင်သူသည်မယုံနိုင်စရာနှင့်အံ့သြဖွယ်ကြောင်းစဉ်းစားကြီးပြင်းခဲ့ကြသည်။ ဒါကမှန်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါပြောနေတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုအလေးသာမှုများကိုသင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုမမီမီရည်မှန်းချက်ထားနိုင်သည်ဆိုလျှင်အလေးသာမှုမခွဲခြားဘဲရည်မှန်းချက်ကိုလိုက်စားမည်ဆိုလျှင်မကွပ်မျက်မီကြိုတင်စီစဉ်ထားသင့်သည်။ No-fap ကဂိမ်းမဟုတ်ဘူး။ ဒါကသင့်ကိုဘဝမှာနောက်ပြန်ဆွဲနေတဲ့စွဲလမ်းမှုပါ။ သင်တတ်နိုင်သမျှလွယ်ကူအောင်သင်လုပ်ရန်လိုသည်။ ငါဆိုလိုတာကဒီဟာကသင်၏စိန်ခေါ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍“ စိတ်လှုပ်ရှား” သည်ဟုခံစားရသောကြောင့်သင်၏လက်တော့ပ်ပေါ်တွင်တစ်ညလုံးမထိုင်ပါနှင့်။ အများသုံးနေရာများတွင်သာသင်၏လက်ပ်တော့ပ်ကိုသုံးပါ။ သို့မဟုတ်အခြားဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် - အချို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရှောင်ရှားရန်မိမိကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်မည့်အစား k9 blocking filter ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ထည့်ပါ။
သင်ဤအရပ်မှသာကောင်းရနိုင်သည်။ လူတွေကကောင်းတာတွေကိုမကောင်းတာတွေကိုပဲသတိပြုမိမှာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်က“ မကောင်း” မှစတင်ခဲ့လို့ပါ။
အလုပ်များလူနေမှု Get, ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ရှုပ်သေရ။
အတွေးများ -> စကားများ -> လုပ်ဆောင်ချက်များ -> အကျင့်ဓလေ့များ -> တန်ဖိုးများ -> Destiny
မိမိအလေ့အကျင့်ကိုမျှဝေရန်သည်းမခံနိုင်သောအမျိုးသားတစ် ဦး သည်သူတို့ကိုဖြတ်ထုတ်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်။
5-10min နံနက် & ညဆန့်။
ကအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်နှစ်ရက်အလေးမ / လေ့ကျင့်ခန်း။
Paleo အစားအစာ - အဘယ်သူမျှမနို့, အစေ့။
အဘယ်သူမျှမ junk အစားအစာ / ဆိုဒါ။
ထိုင်နေ / ဖြောင့်ထရပ်တယ်။
အဘယ်သူမျှမ Cracked လက်။
သာ. ကောင်း၏အရည်အသွေးအိပ်စက်ခြင်း (အိပ်ရာရှေ့၌အဘယ်သူမျှလက်ပ်တော့ / အလင်း)
နေ့ 169-173: ငါခက်ခဲတဲ့ flatline ဖြတ်သန်းသွားပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခုကငါတွေ့ဖူးသမျှအရာအားလုံးထက်ပိုပြီးပြင်းထန်တယ် ပျင်းခြင်း၊ ပျင်းခြင်း၊ ပျင်းခြင်း တစ်ခုခုကိုငါ့ကိုနှစ်သက်သို့မဟုတ်ငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေသည်ခဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို netflix ဖွင့်ပြီးတစ်ခုခုကိုကြည့်ဖို့တောင်ကျွန်တော်မစွမ်းနိုင်ဘူး။ ငါစိတ်လှုပ်ရှားစွာရနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာအစားအစာဖြစ်သည်၊ ငါဆက်မစားနိုင်သည့်တိုင်အောင်အစာမစားလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်မျက်နှာသည်ယားယံနေပြီးအဖြူရောင်ခေါင်းများသည်ပိုမိုပျံ့နှံ့နေပြီးမျက်နှာသည်အနီရောင်နှင့်ရောင်လာသည်။ ငါ့အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မှာငါပြောင်းလဲလိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါကိုငါမယုံဘူး၊ ကျွန်တော့်ဆံပင်အတွက်လည်းအလားတူပါပဲ၊ ပါးလွှာပြီးကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အပြင်ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးပြုတ်ကျနေတယ်။
ငါ၏အအိပ်မက်သော်လည်းပိုပြီးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရတဲ့နေကြတယ်, ငါအစစ်အမှန်ဘဝလူတို့နှင့်အတူဖြစ်စေအိပ်မက်အရောအနှောရှိခြင်း, သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူအိပ်မက်နေပါတယ်။ ငါပင်ပန်းအလွယ်တကူစိုးရိမ်ခံစားရတယ်, နေ့တစ်လျှောက်လုံးအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ ငါကအစဉ်အမြဲဤကဲ့သို့သောကြာရှည်မနိုင်ကိုသိနှင့်တော့ဒီ flatline ထွက်စီးရန်ရှိသည်။
နေ့ 174-190: ဒီအတိတ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကမှုန်ဝါးနေတယ်။ သေချာတာပေါ့၊ ငါပြားချပ်ချပ်၌တည်ရှိ၏ယုံကြည်ပါတယ်။ မျက်လုံးချင်းဆုံမိရန်နှင့်စကားပြောဆိုရန်ခက်ခဲသည်။ ဒါပေမယ့်ငါ rebooting ငါသိ၏။ ကျွန်ုပ်ခေါင်းကိုရံဖန်ရံခါအတူတကွခံစားမိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အိပ်မက်များသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာသည်။ ငါအရမ်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းမှုရတဲ့ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကိုငါဘယ်တော့မှ။ ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိအခြေအနေကိုမကျေနပ်သေးသော်လည်းကျွန်ုပ်၏အသွင်အပြင်နှင့်တူသောအရာများအပေါ်ပျော့ပျောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
ငါလုပ်ဖို့အကြံပြုထားတဲ့အရာတစ်ခုမှာအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်သည် အစာရှောင်ခြင်းသည်စိတ်ကျရောဂါနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုတားဆီးသည့်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်ဟုလူသိများသည်။ နောက်ဆုံးငါအစာရှောင်သောအခါခဏတာစွမ်းအင်နိမ့်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုယ်ခန္ဓာသည်သူ့ကိုယ်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းနေသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုပြန်လွင့်နေသည်ဟုခံစားမိသည်။ ဒါ့အပြင်ကောင်းမွန်တဲ့အိပ်စက်ခြင်းကိုလည်းငါထောက်ခံတယ်။ စောစောစီးစီးသွားပါ၊ နှိုးစက်နာရီမထားပါနှင့်။ သဘာဝနိုးပါ။ သင်ဘယ်လောက်ကြာကြာအိပ်စက်အနားယူရမယ်၊ ပြီးတော့နောက်မှသင်လန်းဆန်းမှုခံစားရတာကိုသင်အံ့အားသင့်မှာပါ။
ငါကိုက်ညီမှု၏အရေးပါမှုကိုလည်းဖော်ပြချင်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာအတွင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုမဖြစ်စေဘဲကျန်အသက်တာတစ်လျှောက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားရန်သင်၏စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားပါ။ ဖြေးဖြေးယူပါ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်တစ်နေ့တာဆောင်းပါးအနည်းငယ်ကိုဖတ်ပါ၊ သို့မဟုတ်တစ်နေ့လျှင်သတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုပါ။ ဒါပေမယ့်တစ်နေ့တာကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့သတင်းအချက်အလက်ကိုမသုံးပါနဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အကယ်၍ သင့်မှာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်တွန်းမှုတွေခံစားရပြီးသင်ပြန်ချင်နေပြီလို့ခံစားရရင်ဒီနည်းကိုလုပ်ပါ။ သင်ငြီးငွေ့နေပြီးမိမိကိုယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာခံစားရရန်စောင့်ဆိုင်းနေပါကသင်မပြုလုပ်သင့်ပါ။ အဲဒီအစားအခြားအလေ့အကျင့်ကောက်ဖို့ကြိုးစားပါ။ သငျသညျလုံးဝအလေ့အကျင့်ငါးခုကောက်ဖို့မလိုပါ။ တစ် ဦး တည်းအလေ့အထအလုံအလောက်ကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်။ ပထမမှာခက်ခဲလိမ့်မယ် ဒီမျှော်လင့်ထား။ ပထမစာမျက်နှာအနည်းငယ်သို့မဟုတ်စာအုပ်၏ပထမအခန်းကိုဖတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဒါပေမယ့်အရာဝတ္ထုတွေအများကြီးထဲကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့သင့် ဦး နှောက်ကဒီကျန်းမာလှတဲ့လှုံ့ဆော်မှုပုံစံအသစ်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပိုပြီးပျော်ရွှင်လာပါလိမ့်မယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ငါအနည်းငယ်ပိုကောင်းခံစားရတယ်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားသည်ဟုထင်ရသော်လည်းကျွန်ုပ်၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်လိင်စိတ်မပြန်ရသေးသည် ငါကအိပ်မက်တွေကြောင့်အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိပေမယ့်လိင်မှုဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုမတိုင်မီငါငယ်ငယ်လေးကတည်းက porn ကိုစပြီးကြည့်ခဲ့တဲ့အတွက်အချိန်ယူရလိမ့်မယ်လို့ငါအသိအမှတ်ပြုသည်။ ငါသုတ်ရည်မထွက်ခင်နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်တီထွင်ခဲ့သောအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်အစာရှောင်။ ကြိုးစားပါ။
နေ့ 191-203: မင်္ဂလာပါ ငါသန့်ရှင်းတဲ့ကျောင်းကနေဒီတစ်ခုလုံးကိုချိုး! ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူတယ် ဒါကကျွန်တော်တစ်ဖန်ပြန်လည်အသက်ဝင်ခြင်းမရှိသေးသောပထမဆုံးကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်သည်။ ငါ့စာသင်ခြင်းကိုရက်ပေါင်း ၂၀၃ ရက်နောက်ကွယ်မှစတင်မည်။ ဒါကြောက်စရာကောင်းတယ်
ရိုးသားဖို့, အဲဒီအတိတ်ကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြမ်းတမ်းခဲ့ကြပြီ။ ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်မပိုကောင်းလာပြီဖြစ်ကြောင်းကိုခံစားရတယ်။ ငါပိုကောင်းတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်နေပါ၏။ ငါအခြို့သောနည်းလမ်းများစဉ်းစားအဘယ်ကြောင့်ငါပိုကောင်းတဲ့ငါ့အရှုပ်ထွေးသောနားလည်, ဘာကွောငျ့လဲငါ့ကိုကူညီဖို့ / ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ငါကပို Self-သတိထားမိပါတယ်, ငါပို, နှလုံး-တပြင်လုံးကိုကျေးဇူးတင်နှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူအသံဖြစ်ကြောင်းကိုအောက်ပါ။ ငါသညျအမှနျတကယျတစ်ဦးဖြစ်လျက်ရှိအဖြစ်ဖြစ်၏သကဲ့သို့ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်နေပါ၏။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင် cheerleader တနှင့်ထောက်ခံသူဖြစ်လာစေရန်စတင်, ငါ့နေ့စဉ်ဘဝမှလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုထည့်သွင်းနေပါတယ်။
ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်အသေအချာပြောနိုင်သည့်အရာများပြောင်းလဲသွားပြီ။ အသံသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာသည် (ငါစိုးရိမ်လာသောအခါပိုမိုမြင့်မားလာသည်ကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည်); လူထုရှေ့စကားပြောသောအခါစိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းသွားသည် (ကျွန်ုပ်သည်လူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်စိုးရိမ်ပူပန်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းစကားပြောဆိုချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းစွာပြသနိုင်ခြင်း); မျက်နှာနှင့်အရေပြားအသားအရေသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည် (မသုံးပဲဆပ်ပြာသို့မဟုတ်ခရင်မ်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အသားအရောင်သည်သဘာဝကျပုံရ) ပိုမိုအားကောင်းသောစွမ်းအားများ (ပိုမိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အချိန်ကုန်ခံရန်အချိန်နည်းပါးခြင်း)၊ မိမိကိုယ်ကိုသတိထားမိခြင်း (မကောင်းသောအတွေးများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကူးယူပြီးကောင်းသောအတွေးများသို့လှည့်လာသည်)၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုမိုနားလည်လာသည်။ ကြွက်သားများမလုံလောက်သောအလုပ်လုပ်နေရခြင်း၊ ပိုမိုများပြားသောလူမှုရေးအချက်များ (လူတစ် ဦး သည်မည်သို့တွေးနေသည်၊ ခံစားနေသည်ကိုကျွန်ုပ်မကြာခဏပြောပြနိုင်သည်); ပိုကောင်းသောဟာသ (ငါကလူတခါတရံရယ်မောစေ); ပိုကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ် (ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနှင့်ငါ့ကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုဂရုစိုက်); ဂီတသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသည် (ယခုငါဂီတကိုနှစ်သက်သည်); ပြproblemsနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူး (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုပြီးစုစည်းပြီးမသိတဲ့သူကိုခုန်ထွက်ဖို့ကြောက်လန့်နေတယ်) ။
ငါဘယ်မှာလဲ - လွန်ခဲ့သောတစ်ရက်ကပင်နောက်သို့ပြန်လာရန်စိုစွတ်သောအိပ်မက်နှစ်ခုမက်ခဲ့ဖူးသည်။ ငါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကို၏စွမ်းအင် zapped ခံစားရတယ်။ ငါကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးသမ္မာသတိရှိနေစဉ်ပြက်လုံးများပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းမျက်စိထိတွေ့မှုသည်ခက်ခဲသည်။ ငါတစ်နေ့လုံးပင်ပန်းနေသည်ဟုခံစားရသော်လည်းအိပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၁-၂ ပတ်အတွင်းအိပ်မက်များသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်လွင်နေသည်။ ငါ့မှာအပြာရောင်ဘောလုံးတွေရှိတယ်။
အရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာ။ ။ တိုက်တွန်းမှုများကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါအရေးအကြီးဆုံးအရာကမကောင်းတဲ့အတွေးကိုဖယ်ရှားခြင်းမဟုတ်ဘဲမကောင်းတဲ့အတွေးကိုသင်ဘယ်လိုတုန့်ပြန်သည်ဆိုတာကိုငါသိလိုက်ရတယ်။ အကယ်၍ မင်းကခုန်ဆင်းပြီးအသက်ရှူကျပ်ပြီးခေါင်းကိုအရူးတစ်ယောက်လိုလှုပ်လိုက်ရင်မင်းဒီမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ကိုင်တွယ်နေတယ်လို့ငါမထင်ဘူး။ အဲဒီအစား, သင်နက်ရှိုင်းစွာရှူရှိုက်သင့်တယ်, အတွေးသင့်ရဲ့ခေါင်းထဲကနေပျောက်ကွယ်သွားစေခြင်းငှါ, သင်ကဤကဲ့သို့သောလူမဟုတ်သောကြောင့်, သင်ကဒီမစဉ်းစားသင့်ကြောင်းသင့်ကိုယ်သင်ပြောပြနေစဉ်။ ငါထင်တာကအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဟုထင်သကဲ့သို့တဖြည်းဖြည်းအသက်ရှူစဉ်ဤကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုသည်တိုက်တွန်းမှုများကိုတိုက်ဖျက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုကဲ့သို့သောအရာများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ငါရိုးရှင်းတဲ့သင်ကြားပို့ချခြင်းဆိုင်ရာယောဂ / ကြံ့ခိုင်ရေးဗွီဒီယိုကိုမကြည့်သည့်အခါသင်ကြားပို့ချပေးသူသည်အလွန်ချစ်စရာကောင်းသောမိန်းကလေးတစ် ဦး ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါဗီဒီယိုပြတ်တောက်သွားပြီးမြေပေါ်မှာပြုတ်ကျသွားပြီးပြန်ဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ အခုတော့အဲဒါဟာလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်လာပြီ။ လုပ်သင့်တာကသူမရဲ့လှပမှုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ၀ န်ခံတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးအရာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ မိန်းကလေးတိုင်းကမင်းကိုနမ်းဖို့ဒါမှမဟုတ်မင်းကိုချစ်ဖို့ထွက်မလာကြတာပါပဲ။ မိန်းကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာမဟုတ်ဘဲပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်ကျွန်ုပ်ယူမှတ်မည်။ သူမကြီးပြင်းခဲ့တဲ့နေရာ၊ သူမအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ၊ သူမမှာဘယ်လိုအလုပ်မျိုးရှိသလဲဆိုတာကိုသူမှန်းဆဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ငါကမိန်းကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကိုအခုလူလိုပိုပြီးတုန့်ပြန်လိမ့်မယ်။
နေ့ 204-210: ငါပိုကောင်းတဲ့ခံစားရတယ်ငါယုံကြည်ပါတယ်။ မျက်လုံးချင်းဆုံခြင်း၊ အသံပိုမိုနက်ရှိုင်းခြင်း၊ စကားလုံးများပိုမိုရှင်းလင်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် "ဟိုင်း" ဟု ပို၍ ပြောပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များကိုပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးပိုမိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါသည်။ အကျိုးကျေးဇူးများကိုဖြေရှင်းခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်နေ့စဉ်ဘ ၀ ၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပျော်မွေ့နေသည်။ ငါတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း, အအေးမိရေပန်းများယူပြီးအပြည့်အဝအိပ်ပျော်ခြင်း, paleo စားခြင်း, ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း (မြင့်မားသောပြင်းထန်မှု) နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုမိုတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ အမှုအရာဇောက်ထိုးကြည့်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာသည်ပိုမိုရှင်းလင်းစွာကြည့်နိုင်သည် (ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပြီးမျက်နှာ၏မျက်နှာများသည်မသေသေးပါ)၊ ကျွန်ုပ်၏မျက်လုံးများကတောက်ပနေပြီးကျွန်ုပ် ပို၍ စနစ်တကျလျှောက်လှမ်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အိပ်မက်များသည်ပြင်းထန်ပြီးအပြာရောင်ဘောလုံးများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်းပြင်းထန်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုအကင်းပါးပါးသိရန်သေချာသည်။ libido သည်တဖြည်းဖြည်းတိုးများလာနေသည်။
၎င်းသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ခရီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ငါတစ်ကြောက်မက်ဘွယ် NoFap post ကိုအပေါ်သို့လဲ။ http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/2v8aw4/i_found_an_old_journal_of_my_grandfathers_and/
ဒါဟာဂျာနယ်အရေးပါမှုငါ့ကိုသတိပေးနေပါတယ်။ အရာအားလုံးရာအရပ်သို့လဲကျ, ငါဘဝမှော်ခဲ့ခံစားခဲ့ရရှိရာငါ့အခရီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးကြိမ်ရှိခဲ့သည်။ ငါသူတို့အားအချိန်လေးမှတျတမျးတငျထားခဲ့ဆန္ဒရှိဒါကြောင့်တဖန်ငါသူတို့အားခံစားချက်တွေကိုဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။ ငါပိုကောင်းတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်အောင်ငါယခုဂျာနယ်မှငါသောသူကဲ့သို့ကြီးထွားသကဲ့သို့ငါသင်ယူနေပါတယ်သောသင်ခန်းစာများကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကတိပေးပါလိမ့်မယ်, ငါပေးပါ့မယ်ငါ့သားသမီးသင်ပေးစေခြင်းငှါဒါ။
နေ့ 211-217: ဒီရက်သတ္တပတ်ကအရမ်းအားကြီးတယ် ငါကလူအများကြီးအများကြီးပိုစကားပြောခဲ့ကြရတယ်။ ငါကလူသစ်တွေနဲ့အသိအကျွမ်းတွေအကြောင်း“ ဟိုင်း” လို့ပြောခဲ့တယ်။ ငါမျက်လုံးချင်းမချိုးဘဲယခုမိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောနိုင်သည်။ ငါ့အေးမြတယ် ငါနက်ရှိုင်းစွာရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်ငါ့စိတ်ခံစားမှုကိုပိုနားလည်သဘောပေါက်။ ငါသည်ငါ့စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရနိုင်ပြီးငါကပိုကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အတွေးအခေါ်များကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးများနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးလောက၌ကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုခံစားမိသည်။
ငါအရမ်းပင်ပန်းသည့်နေ့ရက်များရှိပြီးစိုစွတ်သောအိပ်မက်ပြီးနောက်စိတ်မသက်သာသည့်ယေဘုယျလမ်းကြောင်းကိုသတိပြုမိသည်။ (ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်သည်ခုနစ်ရက်အတွင်းစိုစွတ်သောအိပ်မက်ငါးခုရှိသည်။ ၎င်းသည် NUTS (pun ရည်ရွယ်) ဖြစ်သည်။ ငါကင်လုပ်စားသောအစာကိုစားမိလျှင်ပင်ပန်းသည်ဟုခံစားရပြီးစာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖတ်ရှုခြင်းနှင့်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးများခံစားရနိုင်သည်။ ငါဝါကျတစ်ကြောင်းတည်းဖြင့်ပြောနိုင်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ပိုမိုအသက်ဝင်သည်ဟုခံစားရသည်။
တိုက်တွန်းမှုများကိုတိုက်တွန်းလိုပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားကာကွယ်ရန်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်၏စိတ်ခံစားမှုများနှင့်အချို့သောအရာများအားကျွန်ုပ်မည်သို့တုံ့ပြန်ပုံကိုတက်ကြွစွာစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုကိုင်တွယ်ရန်သင်ယူနေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ bikini မြင်ကွင်းတစ်ခုရှိခဲ့ရင်ငါ့မျက်လုံးတွေကိုငါမလွှဲပစ်ဘူး။ အဲဒီအစားငါထိုသူကိုအသိအမှတ်ပြု, ထိုသူ၏မျက်နှာကိုကြည့်, ငါတောင်မှငါမသိသူတစ် ဦး ဦး မှဤမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမဖြစ်သင့် (ဒါမှမဟုတ်ငါ့အရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်၌တည်ရှိလည်းမရှိ) သိရလိမ့်မယ်။
ငါဒီကနေအကျိုးကျေးဇူးများဆက်လက်တိုးတက်လိမ့်မည်ဟုငါခံစားရတယ် "ငါပုံမှန်" စတင်လိမ့်မည်ဟုခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးမှာသင့်အားယောက်ျားများအားအားပေးမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုပေးရန်ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် ၂၁၇ ရက်တာရက်အကြာတွင်တိုးတက်မှုအချို့ရှိသည့်အရာများကိုစာရင်းပြုစုမည်။
ငါ၏အမှုအာရုံတွေအများကြီး သာ. ကောင်း၏။ ငါကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အများကြီးပိုကောင်းပုံရိပ်တွေတက် conjure နိုငျသညျ။
အကြှနျုပျ၏ willpower (အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းနေ့တိုင်း, ဒုတိယအတွေးမပါဘဲခိုင်မာတဲ့ဘာဝနာအစည်းအဝေးများကျန်းမာအစားအစာကိုစား) အစွမ်းရှိ၏
ငါကပိုမိန်းကလေးများနှင့်ပြောဆိုပါ။ အရင်တုန်းကငါမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတစ်နေ့လုံးဘာမှမပြောဘူး။ ယခုငါသူတို့နှင့်အနည်းဆုံးတစ်ရက်လျှင်စကားပြောသည်။
ဝက်ခြံပျောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှု? အယ်။
ကျန်းမာသန်စွမ်း-ရှာဖွေနေလိင်တံ (တကယ်။ သူကတောင်ပိုကြီးကြည့်။ )
LINK - ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ (ခေတ် 20) (ဂျာနယ် / အကြံပြုချက် / အကျိုးကျေးဇူးများ) နေ့ 217 ထဲကတက်ပြီး
BY - နင်
“ဂိမ်းဆော့ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် အလုပ်မလုပ်သော ဆိုရှယ်မီဒီယာကဲ့သို့သော ဒစ်ဂျစ်တယ်သကြားများကို အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းသည် အန္တရာယ်ကို တိုးစေသည်... t.co/uOmDRV0kVt